IHawaii imbi kakhulu e-US ukulungiselela indawo yokuhlala efanelekileyo
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Iindaba Eziphambili zaseHawaii » IHawaii imbi kakhulu e-US ukulungiselela indawo yokuhlala efanelekileyo
Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • inkcubeko • Iindaba Eziphambili zaseHawaii • Icandelo lokungenisa izihambi • Iihotele kunye neeholide • iindaba • Xanduva • Tourism • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zeWired Travel • komzila Ngoku • Iindaba zase-USA ezaphulayo • Iindaba ezahlukeneyo
Inani leepropathi ezinobungakanani bezilwanyana ezikhoyo ziyahluka kakhulu kwindawo ngendawo, zisenza ukuba ezinye iindawo zelizwe zifikeleleke ngakumbi kubanini bezilwanyana kunezinye.
Inani leepropathi ezinobubele kwizilwanyana ziyahluka kakhulu ukusuka kurhulumente ukuya kurhulumente.
I-Illinois, iMississippi kunye neNew York zezona ndawo zilungele izilwanyana zasekhaya.
IHawaii, iAlaska kunye neWest Virginia zezona ndawo zincinci ezinobuhlobo e-US.
I-67% yamakhaya ase-US (malunga nezigidi ezingama-85 zeentsapho) zinezilwanyana zasekhaya, kwaye izindlu ezizizigidi ezingama-43 zihlala ngabaqeshi. Ke, kuthekani ukuba ufuna ukufuduka kunye nomhlobo wakho onoboya?
Ngale nto engqondweni, iingcali zohambo zazifuna ukufumanisa ukuba ngawaphi amazwe, iidolophu kunye nezixeko ezinelona nani likhulu lamakhaya afumanekayo okurenta nokwamkela izilwanyana zasekhaya.
Ukujonga kwabangamashumi amahlanu abona bantu baninzi US izixeko, iingcali zirekhode inani leepropathi ezikhoyo zokurenta ezamkela izilwanyana zasekhaya. Ukongeza, sifumene ipesenti yeerhafu ezikhoyo kurhulumente ngamnye oza kwamkela umqeshi ngezilwanyana zasekhaya, etyhila ezona ndawo zibalaseleyo elizweni kubanini bezilwanyana ukuba baphile.
I-Illinois lelona lizwe lilungileyo elizweni kubanini bezilwanyana abafuna ukurenta, nge-59.87% yeepropathi ezamkela izilwanyana zasekhaya. Ke ukuba ungumnini wesilwanyana ujonge ukufudukela kwindawo entsha yelizwe, i-Illinois inokuba yinto efanelekileyo ukubheja kuwe!
Indawo yesibini egqwesileyo yokurenta izilwanyana zasekhaya yiMississippi, ngama-52.28% ezinto ezifumanekayo kubanini bezilwanyana. Oku kwenza ukuba iMississippi ibe yeyona inomdla kwezilwanyana kuwo onke amazwe akumazantsi, kunye nendawo entle kubanini bezilwanyana ukuba baphile.
Inew york lilizwe lesithathu eligqwesileyo elizweni lokurenta okulungele izilwanyana zasekhaya, nge-47.89% yeepropathi ezivumela abaqeshi bezise izilwanyana zabo. Le pesenti iphezulu yenza iNew York ibe lelona lizwe lilungileyo kunxweme lwaseMpuma lokuhlala nezilwanyana zasekhaya.
Amazwe aphezulu angama-10 aPhezulu aBantu abaQhelekileyo abaRholayo
Uhlu imeko Izilwanyana ezinobubele Iyonke Lets % Izilwanyana ezinobuncwane
3 Inew york 6320 13196 47.89%